Tag: american awara awara | Martech Zone
Tag: american awara awara
Nwee obere azụmahịa? Nnyocha Google na-egosi na vidiyo dị n'ịntanetị nwere ike ịkwalite ahịa na ụlọ ahịa site na 6%, ma bulie ncheta akara site na 50%. Google na American Express na-ejikọ ma na-emepụta vidiyo maka obere azụmaahịa iji kwalite obere azụmaahịa ha site na iji vidiyo. Akụkọ Azụmaahịa m bụ ngwa ọrụ anaghị akwụ ụgwọ maka obere azụmaahịa sitere na Google na American Express. Ngwaọrụ ahụ na-enye usoro ntụzi-aka obere ndị nwe azụmaahịa ka ha kee